Garaad Cabdiqani:"Nin tuur leh siduu u seexdo isagaa yaqaan".
Laascaanood,12 Jan 2004.Garaad Cabdiqani Garaad Jaamac oo ka mid ah garaadada beesha Dhulbahante ayaa mar ay idaacada BBC-du waraysi siiyey waxaa uu ugu baaqay maamulada Puntland iyo Somaliland inay joojiyaan colaada ay ka abaabulayaan gobolka Sool.
"Ilaa iyo intii ay ciidamada Puntland soo gaadheen Laascaanood waxaa dhacay wareer badan baa ka dhacay oo xasiloonidii baa luntay,dilbaana dhacay,waxaanuna doonaynaa in ciidamada Puntland inay naga baxaan,kuwa Somalilandna ee la sheegayo inay soo socdaan waa in aanay imaan gobolka oo ay meeshooda naga joogaan." ayuu yidhi Garaad Cabdiqani. "Aniga maamuladaas Puntland iyo Somaliland xoogooda iyo ciidamadooda waxba igama khuseeyaane,waxaa i khuseeya sidii aan nabad iyo xasilooni aan ugu heli lahayn dhulkayaga".ayuu raaciyey Garaadku,isagoo tilmaamaya in uu isagu dhexdhexaad yahay oo aanu labada maamul midna taageeru u haynin.
Garaad Cabdiqani Garaad Jaamac oo ka mid ahaa garaadadii wax ka dhisay labada maamul ee Puntland iyo Somalilandba,ayaan hada midna taageero u haynin,taasoo muujinaysa sida ay tahay siyaasada Garaadada beesha gobolka Sool,kuwaasoo ah kuwa sababay kala qaybsanaanta maanta keentay in beesha la isu adeegsado,oo qaarna laga soo hubeeyo Hargeysa,qaarna ay ka tirsan yihiin ciidamada Puntland ee dhulkooda difaacaya.
Dhanka kale wararka naga soo gaadhaaya magaalada ayaa sheegaya in magaalada Laascaanood ay maanta degen tahay oo ay yaraatay cabsidii laga qabay in uu dagaal halkaa ka qarxo.Waxaa magaalada maalmahan ku soo qulqulayey masuuliyiin badan oo isugu jira wasiiro,xildhibaano iyo taliyayaasha qaybaha kala duwan ee ciidanka Puntland,kuwaasoo shirar kala gooni gooni ah la yeelanaya masuuliyiinta iyo odayaasha gobolka.
Wasiirada soo gaadhay gobolka uu ay ka mid yihiin wasiirka arimaha gudaha Axmed Cabdi Xaabsade,Wasiirka waxbarashada Xassan Maxamuud Dhiilood,Wasiir-xigeenka Dib u dejinta Xassan Majabe,iyo kuwo kaleba.
Shir maanta lagu qabtay guriga Axmed Cabdi Xaabsade oo uu gudoominayey Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ayaa waxa Wasiirku ka codsaday garaadada inay dhameeyaan khilaafka dhexdooda ah,oo ay waajibkii loo doortay gutaan.Xaabsade wuxuu ka hadlay xaalada ka taagan magaalada Yagoori isagoo tilmaamay in marka hore ay arinta u daynayaan odayaasha,hadii ay wax ka qaban waayaana maamulka Puntland uu hawsha qabanayo.
Dhanka kale wararka aan ka helayno magaalada Yagoori oo lagu soo waramayo in ay ka taagan tahay ququlad ku saabsan joogitaanka Wasiirk ka socda Somaliland iyo ciidan uu halkaas ka abaabulayo ayaa sababtay in iska hor imaad in uu dhexmaro dadka magaaladaas ku dhaqan iyo nimankaas ka mushahar qaata Hargeysa,oo damacsan inay iska horkeenaan dadka ku dhaqan deegaankaas.